China Vertical diode laser conbine yag laser ipl shr elight rf warshad mashiino badan leh iyo soosaarayaasha |KEYLASER
ND YAG Tignoolajiyada Laser-ka ayaa si weyn u wanaajisay awoodda lagu daweeyo nabarada melanocytic iyo tattoos iyadoo si degdeg ah loo garaaco.
Daaweynta laysarka ee nabarrada midabada leh iyo tattoosku waxay ku saleysan yihiin mabda'a photothermolysis ee la doortay.Nidaamyada laser-ka ee QS ayaa awood u leh
si guul leh loo iftiimiyo ama loo ciribtiro noocyo kala duwan oo ah epidermal benign iyo nabarrada midabka maqaarka iyo tattoos oo leh khatarta ugu yar.
Cabbirka barta 12*12mm/12*16nm
Mawjada dhererka Diode 808nm/755nm+808nm+1064nm
Cufnaanta tamarta Diode 1-100J/cm2
Soo saarista laser 1000W
Heerka soo noqnoqda 1-10HZ
Ballaca garaaca 6ns
qaboojinta xiriirka Sapphire -5-5℃
Interface ka shaqeyso 10'' Midabka dhabta ah ee taabashada
Cabirka 60*52*132cm (L*W*H)
Awoodda mashiinka 3500W
Nidaamka qaboojinta Compressor qaboojiyaha+semiconductor+hawo+biyo
1. 90% qaybo ka mid ah qalabka gacanta ayaa asal ahaan laga keenay Jarmalka, USA iyo Japan, hubiyaan waxqabadka mashiinka xasilloon, natiijooyin cajiib ah iyo shaqeyn waqti dheer ah.
2. Nidaamka qaboojinta kaamil ah --- Compressor-ku samee qaboojin, 36 saacadood waxay shaqeeyaan iyada oo aan la joojin.macaamiishu waxay dareemaan raaxo iyo xanuun la'aan inta lagu jiro daawaynta oo dhan.
3. menu daawaynta fudud oo saaxiibtinimo, iyo nidaamka ilaalinta digniinta auto ee socodka biyaha, heerka biyaha iyo heerkulka biyaha ee menu, iska ilaali khatar kasta marka ugu horeysa
4. Daawaynta aan fiicneyn.
Xidhmada & Bixinta
Xidhmada Sanduuqa duulimaadka caadiga ah
gaarsiin 2-3 maalmood oo shaqo gudahood
rarid Albaab ilaa albaab (DHL/TNT/UPS/FEDEX/EMS…), Hawada, Badda
Soo saare xirfadle ahaan, waxaanu bixinaa adeegyada soo socda:
1. Albaabka albaabka hawo ahaan: DHL, UPS, TNT, Fedex…
2. 1 sano oo dammaanad bilaash ah, dayactirka nolosha.
3. Tababarka: (Video+Manual+Adeeg Online) Waxa ay kugu ilaalin kartaa in aad si fudud u shaqeyso.
4. Hagaha xirfadle: Injineerada & kooxda iibka kadib ee 24 saacadood oo adeeg online ah oo xirfad leh.
5. Adeegga OEM&ODM ee qaybiyeyaasha.
Waxaa la aasaasay 2007, KEYLASER SCI-TECH Co., Ltd., soo saaraha qalab caafimaad oo caalami ah ayaa soo saara alaabo heer sare ah oo loogu talagalay dhakhaatiirta qalliinka caagga ah, dhakhtarka maqaarka, dhakhaatiirta iyo xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka.
Iyada oo leh khad badeecado kala duwan oo lagu kalsoonaan karo oo ay ku jiraan IPL, microneedle RF, CO2, laser Diode, iyo laser Q-Switch, KEYLASER waxay u adeegtaa warshadaha mid ka mid ah shirkadaha hormuudka u ah heerka R&D adag iyo khibrad qiimo leh.
KEYLASER waxay soo saartaa wax soo saarka ugu horumarsan si uu u hogaamiyo suuqa caalamiga ah iyo alaabooyinka waxaa si caalami ah u suuq gaynaya xafiisyada dibadda, KEYLASER waxay la shaqeyneysaa la-hawlgalayaasha qaybinta adduunka oo dhan si ay u bixiso qanacsanaanta macaamiisha ugu sareysa.
Hore: La qaadi karo 755+808+1064nm diode laser+IPL timaha saarista +YAG saarista tattoo
Xiga: Jidhka Cryolipolysis ee Mashiinka Qaboojinta Dufanka oo leh afar gacan oo isku mar wada shaqeeya